China LED Famakiana Mamirapiratra sy Craft Floor Lamp Manufacture and Factory |Chaoqun
1. Mampiasa vakana jiro LED ho loharanon-jiro amin'ny gorodona, raha ampitahaina amin'ny jiro halogen sy ny jiro incandescent, ny hazavana dia mamiratra kokoa, tsy dia mora simba, mitsitsy angovo bebe kokoa. Mamirapiratra 900-1000 Lumens ny jirony - nefa 12W ihany ny herin'ny herinaratra .
2. Fandotoana tsy misy dingana:10% -100% amin'ny fanitsiana ny famirapiratana, ary ny mari-pana telo loko: 6000K-4500K-3000K azonao atao ny misafidy.Ny fisafidianana jiro samihafa araka ny toe-javatra fampiasana samihafa dia mety hitondra traikefa tsara kokoa amin'ny fiainanao, mila bokotra hikasika ny fifehezana azy. ny antitra sy ny ankizy dia afaka mianatra ny fomba fampandehanana azy haingana dia haingana.
3. 50000h ny androm-piainany.Fotoana lava be io hampiasanao azy io mandritra ny taona maromaro.Tsy mila manova ny loharanon-jiro ianao satria mampiasa vakana LED naorina .Eo amin'ny endriky ny fampiasana ny endrika endrika tsotra sy kanto, mateza ary tsy lany andro.
4. Nampiasa fanaraha-maso malefaka,fanitsakitsahana stepless sy Setup fahatsiarovana.Tadidiny ny fametrahana ny jironao alohan'ny hamonoana azy.Mora kokoa sy malefaka kokoa ny miasa.
5. Tsy mila manahy ianao fa ny biby fiompinao dia handondona mora foana ny hazavana raha avelanao irery ao amin'ny efitrano izy. Mba hiantohana ny fiarovana amin'ny fampiasana dia mampiasa fototra mavesatra izahay, izay mahatonga ny jiro ho marin-toerana kokoa.Don 'aza manahy fa mavesatra loatra izy io ary tsy mora entina, mahia daholo afa-tsy ny fotony. Ny olon-dehibe dia afaka mamindra azy mora foana avy amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mankany amin'ny efitrano fatoriana.
6. Manome serivisy tsara aorian'ny fivarotana izahay: Mifandraisa aminay raha manana olana momba ny kalitao ianao ao anatin'ny herintaona nividianana ity jiro ity.
Boaty mailaka volontany namboarina: 27.5 * 11 * 38.5CM
Ny jiro dia azo omena amin'ny famakiana, fanjairana, fanamboarana sns.
teo aloha: LED Mamirapiratra 2 amin'ny 1 gorodona sy jiron'ny birao
Manaraka: Famakiana LED manjelanjelatra, fanaovan-jiro ary jiro amin'ny gorodona